La Massana — cimilada bisha
World jiga Wadamada Andorra La Massana
La Massana — Andora la Vella La Massana — Soldeu La Massana — Arinsal La Massana — Ordino La Massana — Oo idinna La Massana — Canillo La Massana — El Pas de la Casa La Massana — Escaldes
Celceliska heerkulka maalin kasta ugu badnaan — 20.9°C August. Celceliska heerkulka habeenkii ugu badnaan — 8.2°C August. Celceliska heerkulka maalin kasta ugu yaraan — 0.1°C February. Celceliska heerkulka habeen ugu yaraan — -7.1°C February.
Roobab ugu badan — 134.6 mm Waxaa lagu duubay May. Roobab Ugu Yar — 31.7 mm Waxaa lagu duubay December.